इच्छाशक्ति भए त यस्तो परिवर्तन गर्न सकिन्छ ! (भिडियोमा) | Kendrabindu Nepal Online News
इच्छाशक्ति भए त यस्तो परिवर्तन गर्न सकिन्छ ! (भिडियोमा)
२३ आश्विन २०७६, बिहीबार १८:५०
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन् । २३ वर्षपछि हुन लागेको राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि काठमाडौँमा धुमधामका साथ तयारी गरिँदैछ ।
राष्ट्रपति सी हिँड्ने बाटो कालोपत्र गरिनुकासाथै सडकका छेउछाउमा बिरुवा रोप्नेदेखि पोष्टर टाँस्ने र रङ लगाउनेसम्मका कामहरु भइरहेका छन् ।
विभिन्न स्थानमा राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि स्वागतद्वारा निर्माण गरिएका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र राष्ट्रपति सीका पोष्टरहरु टाँसिएका छन् ।
यतिबेला काठमाडौंलाई हेर्दा लाग्छ कुनै विकशित देशको शहर हो । त्यो पनि एक साताको मेहनतमा यस्तो गर्न सम्भव भएको हो । काठमाडौंलाई चिटिक्क पारिनुका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सी बस्ने होटलसम्म सडक कालोपत्रे गरिएको छ । सडक छेउमा फूल तथा बिरुवा रोपिएका छन् ।
सडकको दुई छेउमा रहेका बिजुलीका पोलहरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सीको फोटो झुण्ड्याइएको छ । ठाउँ-ठाउँमा स्वागतद्वार बनाइएको छ । २५ गते नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति स्वागतका लागि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः
xi jing ping, काठमाडौँ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ
युवती जिस्क्याएको आरोपमा भोजपूरमा खुर्पा प्रहार, पाँच जना घाइतेNext
पूर्वतयारी तीव्र : काठमाडौंमै एक हजार आइसोलेसन बेड राखिने